Ukukhwela amahashe | Amahashe eNoti
Njengoko besesitshilo, baninzi uqeqesho kwezemidlalo zamahashe, phakathi kwabo ukukhwela, nangona kubonakala ngathi kuyafana nezinye iindlela, oku kubandakanya ubugcisa bokugcina ulawulo oluchanekileyo phezu kwehashe, ukongeza ekwazini indlela yokuphatha, ukukhwela ihashe kuthetha ulwazi oluyimfuneko ukukhathalela amahashe nokusetyenziswa kwezixhobo ekufuneka sizisebenzisile.
Kwesi sithuba ungafumana yonke into enxulumene nehlabathi lamahashe kunye namahashe. Asinakulibala ukuba ngumdlalo sinyanzelisa kakhulu kwaye kufuneka sizikhathalele izilwanyana zethu, ngezixhobo ezifanelekileyo kunye nokutya okumnandi ukuze amahashe akwazi ukwenza konke okusemandleni, ukongeza ekubeni oogqirha bezilwanyana babekhona, ukuze izilwanyana zethu zingabinazingxaki zingenakulungiseka.
Eyona nzakala iqhelekileyo xa ukhwele ihashe
Ukukhwela ngumdlalo wezemidlalo apho umkhweli esebenza kwiindawo ezininzi ezibonakalayo. Inceda kwimisipha yethoni, ukugcina ...
Ufunda njani ukukhwela ihashe
por UCarlos Garrido yenzayo 5 iminyaka .
Ihashe sesinye sezilwanyana ezithobekileyo kwaye esilungelelanise ngcono ubomi ne ...
Isifundo sakho sokuqala sokukhwela
Esi iya kuba sisifundo sakho sokuqala sokukhwela. Mhlawumbi wawusele ukhwele ihashe ngaphambili, xa umdala ...
Ukuqina komkhweli: Ukuzivocavoca umlenze
Ukukhwela, ngaphandle kwezimvo zakhe, ngumdlalo. Kwaye ukuba awundixeleli ...
Umkhweli ukulungiselela ngokwasemzimbeni
Umkhweli oqeqeshiweyo kuya kufuneka akhwele amahashe amaninzi ngosuku olunye, kwaye ngokuqhubekayo. Kwaye nangona zininzi ...
Ukufudumeza ihashe ngaphambi kweseshoni yoqeqesho (I)
Njengathi, phambi kokuziqhelisa umdlalo kufuneka sizolule kwaye sihambe kancinci, ihashe kufuneka lenze okufanayo….
Iintambo ezincedisayo kunye neengozi zazo (III): ichambon
I-chambón luhlobo lokuncedisa ekunokubiza enye yeendlela ezithambileyo. Ikhona…
Ulawula njani ihashe elinovalo ngaphandle kokufa uzama (V)
Ukurhoxiswa ekubekeni intloko yehashe
Namhlanje siza kuthetha ngokuyekiswa ukusebenza, okanye njengoko uJuan Francisco F. Muñoz esithi "ucofa ibhalbhu yokukhanyisa." Usikelelwe "uncontract!" Ewe…
Uqeqesho lwe-Olimpiki yamahashe
Ngaphezulu kwenkulungwane, ukukhwela ihashe kuthathelwe ingqalelo njengenxalenye yeMidlalo yeOlimpiki, hayi kwi ...
Iingozi zokuwa kwihashe
Kuyinyani ukuba kule bhlog sikhuthaza abantu ukuba bafikelele kumahashe abakhwela ngaphakathi ...